musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Costa Rica Kupwanya Nhau » Nei vese maCosta Ricans Vagari vemuSarudzo?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Caribbean • Costa Rica Kupwanya Nhau • El Salvador Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Guatemala Kuputsa Nhau • Honduras Breaking News • nhau • Nicaragua Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nicaragua, Costa Rica vese vanogovana nhoroondo yeGuanacaste Day yanhasi, unodiwa kune vashanyi uye vagari vemuCosta Rica.
ICentral American Federal Republic inopemberera Zuva reGuanacaste
Kutonga kweSpain pakati peAmerica kwakapera muna 1812 zvichitevera Hondo yeMexico yeRusununguko. Muna 1824, Costa Rica yaive chikamu che Federal Republic yeCentral America, pamwe nedzimwe nyika dzakadai seEl Salvador, Guatemala, Honduras, neNicaragua.
Guanacaste Zuva izororo revanhu muCosta Rica, rinopembererwa musi waChikunguru 25. Mukufamba kunoitirwa kudzoreredza chikamu chezvekushanya mushure meCVV-19 denda, zororo iri richaendeswa kuMuvhuro unotevera kubva muna 2022 zvichienda mberi
Iyo inozivikanwa zvakare se 'Kuwedzeredzwa kweNicoya Day' (La Anexión del Partido de Nicoya), zuva rino rinoratidza kuwedzerwa kweGuanacaste muna 1824 apo dunhu iri rakava chikamu cheCosta Rica.
Dunhu reGuanacaste raive chikamu cheNicaragua uye yakapoteredzwa nechokuchamhembe kweCosta Rica. Mumaguta makuru matatu muGuanacaste, pakanga paine misangano yakavhurwa yaikurukura nezvekubva kuNicaragua kuenda kuCosta Rica. Referendamu yakadaidzwa kuti isarudze zvekuita. Mune referendamu, Nicoya naSanta Cruz vakavhota hongu kujoina Costa Rica, nepo Liberia yakavhota kuti igare neNicaragua. Mhedzisiro yacho yaive yekufarira kuwedzerwa neCosta Rica.
ICentral American Federal Republic yakanyatsopasisa mutemo ndokuusaina muna Chikunguru 25th 1824, ichibvumira Guanacaste Province kuve chikamu chenharaunda yeCosta Rican.
Gore rega rega, Chikunguru 25, mushanyi aiona zvishoma chinhu siyana zviri kuitika. Vana vechikoro havasi kuchikoro. Mabhangi, mahofisi ehurumende, uye dzimwe nzvimbo dzebhizinesi zvakavharwa. Vanhu - uye kunyanya vana vadiki - vakapfeka chaiwo mapfekero (akajairika mapfekero, kazhinji eakatsvuka, machena, uye eblue akasiyana siyana.
Chakavanzika, chakagadziriswa: Nhasi izuva re "Guanacaste Day" kana zvakatonyanya, kupemberera "la Anexión del Partido de Nicoya" (iyoKuwedzeredzwa kweGuanacaste").
Zororo iri rakanyanya kukura pano muTamarindo, sezvo isu tiri mudunhu reGuanacaste - panotangira kupemberera kwezuva. Izvo zvakati, Guanacaste Zuva izororo rakakura muCosta Rica, uye kwete muGuanacaste chete: Nhasi izororo repamutemo kumatunhu ese manomwe. Nhasi rinokudza zuva iro peninsula yedu - parizvino dunhu - yakava chikamu cheCosta Rica. Nhasi izuva remhemberero.
Zvakatanga Mazana Emakore Apfuura…
Nhasi zvinotanga kwete nhasi asi makore mazhinji apfuura - mazana emakore apfuura, muchokwadi, apo Spain yakatanga koloni nharaunda yatinoziva iye zvino seCentral America. Pakati pemakore ekuma1500 (kukoloniwa) uye kutanga kwema1800 (rusununguko), Central America yaive nemapurovhinzi akati wandei eSpain. Mapurovhinzi maviri akadaro: Dunhu reCosta Rica uye Dunhu reNicaragua.
Munguva iyi, iyo Partido de Nicoya - inzvimbo iyo nhasi, inokomberedza rinenge iro rese iro Costa Rica Guanacaste province - juggled kuvimbika kumatunhu ese eCosta Rica neNicaragua. The mechi zvakare vakapindira mune kuzvitonga kwezvematongerwo enyika - hongu, nguva dzose nekuvimbika kwekupedzisira kuguta reSpain reCentral America kuGuatemala.
Mukufamba kwemazana matatu emakore, iyo Partido de Nicoya yakanga yagadzira hukama nehupfumi pamwe neProvince yeCosta Rica. Saka, muna 1812, Spain payakadaidzira vamiriri vematunhu kuti vaende kuCortes de Cádiz (Cadiz Courts), Nicoya akasarudza kutumira mumiriri wavo nesangano reCosta Rican. Mubatanidzwa wepamutemo wanga wazvarwa.
Asingasviki makore gumi gare gare, muna 1821, Central America yakava yakazvimirira kubva kuSpain. Pakazosvika 1824, Central America yakanga yaumba nyika yakazvimirira, iyo República Federal de Centroamérica, neimwe nzira inozivikanwa seFederal Republic yeCentral America.
Guanacaste: Sarudzo Yakazvimirira
The Partido de Nicoya yaive panguva yekuchinja: Vangabatana Federal Federal yeCentral America sechikamu chedunhu rakazvimirira reNicaragua, kana sechikamu chedunhu rakazvimirira reCosta Rica?
Panguva iyoyo, Nicaragua yakanga yakatarisana nemhirizhonga uye gakava rezvematongerwo enyika. Costa Rica, kune rumwe rutivi, yaive nerunyararo. Pamusoro pezvo, hukama hwekutengesa pakati peCosta Rica neiyo mechi vakanga vachiri vakasimba (uye vachikura nesimba).
Asi hongu, zvinhu zvainge zvisina kujekeswa: Kwaive nehukama hwezvematongerwo enyika nehukama kumatunhu ese akazvimirira. Saka, apo Costa Rica yakawedzera kukoka kwenzvimbo kune Partido de Nicoya, Nicoya akadana vhoti.
Maguta matatu makuru aNicoya - Villa de Guanacaste (yava kunzi Liberia), Nicoya, uye Santa Cruz - vakapedza mwedzi yakati wandei muna 1824, vachikurukura mikana iyi. Pakupedzisira, Nicoya naSanta Cruz vakavhota hongu: Iyo Partido de Nicoya yaizowedzera kuCosta Rica.
Musi wacho waive July 25, 1824.
Nhasi, Costa Rica inomiririra rugare uye democracy
Saka nhasi uye wega Chikunguru 25, muCosta Rica yose, tinopemberera dunhu runyararo (uye ruzhinji) danho kujoina nyika yedu ine rugare (uye yedemokrasi).
Aya mafungiro aunonzwa kwese kwese uye kazhinji: "de la patria por nuestra voluntad ” - "Costa Rican nekusarudza." Isu tiri Costa Rican nekuti isu takasarudza kudaro, uye tinofara nesarudzo. Uye saka, nhasi, ungangonzwa zvakawanda mumhanzi, ona mashoma mafayawekisi, uye tora tsoka yako kune vamwe tsika dzevanhu kutamba. Kana iwe uine rombo rakanaka, unogona kubata paredhi.
Uye iwe uchiri pazviri, usakanganwa kubata ruoko-chanza tortilla ja uye girazi re tamarind muto. Ivo vanozvikudza Guanacaste tsika!